Wararka - Yaree kala soocidda filimada
Filim soo gaabiya waxaa loo isticmaalaa iibinta iyo geeddi-socodka gaadiidka ee alaabooyinka kala duwan. Shaqadeeda ugu weyni waa xasilinta, daboolida iyo ilaalinta sheyga. Filimka yaraanaya waa inuu lahaadaa iska caabbinta daloolka sare, yaraynta wanaagsan iyo culeyska hoos u dhaca qaarkood. Inta lagu guda jiro howsha sii yareysa, filimku ma soo saari karo godad. Maaddaama filimka yareynta badanaa loo isticmaalo banaanka, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro wakiilka UV-anti-ultraviolet. Oo ay ku jiraan OPS / PE / PVC / POF / PET filimka yaraanaya.
1) PE-ga kuleylka kuleylka kuleylka ah ayaa si balaaran loogu isticmaalaa dhamaan baakadaha khamriga, gasacadaha, biyaha macdanta, cabitaanada kala duwan, dharka iyo alaabada kale. Badeecaddu waxay leedahay dabacsanaan wanaagsan, saameyn ku caabbinta, iska caabbinta ilmada, mana sahlana in la jebiyo. , Kama cabsaneyso mowjadda, heerka yaraanshaha weyn;
4) filimka OPS ee soo yaraanaya (polytyrene oriented) filimka kuleylka kuleylka ah waa nooc cusub oo baakidh ah oo leh qalab kuleylka kuleylka kuleylka ah oo buuxinaya shuruudaha ilaalinta deegaanka. OPS kuleylka kuleylka kuleylka wuxuu leeyahay awood sare, qalafsanaan sare, qaab deggan, iyo Shahaadada dhalaalka wanaagsan iyo daahfurnaanta. Ka shaqaynta habboon, midabaynta fudud, waxqabadka daabacaadda wanaagsan, iyo xallinta daabacaadda aadka u sarreeya. Calaamadaha ganacsiga ee sida joogtada ah u daba socda daabacaadda wanaagsan, gabi ahaanba waa horumar xagga qalabka. Sababtoo ah yaraanshaha iyo xoogga filimka OPS, waxay si dhow ula jaan qaadi kartaa weelasha qaabab kala duwan leh, sidaa darteed ma daabacan karto oo keliya qaabab fiican, laakiin sidoo kale waxay la kulmi kartaa isticmaalka weellada baakadaha ee cusub oo leh qaabab kala duwan.
Filim aan sun ahayn, ur lahayn, dufan u adkaysta oo buuxiya heerarka nadaafadda cuntada ayaa u oggolaanaya naqshadeeyayaasha inay isticmaalaan midabbo indhaha soo jiidan kara si ay u gaaraan naqshad calaamadda ah 360 °, iyagoo siinaya ciyaar buuxda hal-abuurka iyo male-awaalka, si cabbitaannada iyo alaabooyinka kale ay ugu jiri karaan calaamadee Nidaamyada la adeegsanayo ayaa aad u muuqda, waxay muujinayaan sawirka shelf, waxayna soo saarayaan weel aan la fileynin. 5) Astaamaha filimka polyester-ka-kuleylka-yareyn kara: waa mid deggan heerkulka caadiga ah, wuu yaraanayaa marka la kululeeyo (ka sarreeya heerkulka kala-wareegga dhalada), kuleylkuna wuxuu ka yaraadaa in ka badan 70% hal jiho.
Jidhku waa mid hufan oo ka tarjumaya sawirka sheyga.
Ight Si adag u adkee baakadaha, ka hortagga kala-firdhinta wanaagsan.
Proof Roob, qoyaan, iyo caaryaysi.
Recovery Soo kabasho la'aan, oo leh hawl ka hortag been abuur ah.
Filinka polyester-ka ee yarayn kara waxaa badanaa loo isticmaalaa cuntada ku habboon, suuqa cabitaanka, qalabka elektarooniga ah, alaabada birta ah, gaar ahaan calaamadda hoos udhaca ayaa ah meesha ugu muhiimsan ee laga codsado. Sababtoo ah horumarka degdega ah ee dhalooyinka cabitaanka PET, dhalooyinka cabitaanada sida koola, sprite, iyo casiirka kaladuwan waxay ubaahanyihiin filimka yareyn kara kuleylka PET in laguwaafajiyo astaamaha kuleylka kuleylka. Waxay ka tirsan yihiin qaybta polyester-ka waana agab bey'adeed u fiican oo si fudud dib loogu warshadeyn karo. isticmaal. Ka sokow in loo adeegsado sumcado yareynaya, filimada cajaladda-yareyn kara kuleylka ayaa hadda sidoo kale loo isticmaalaa baakadaha dibedda ee badeecooyinka maalinlaha ah.
Sababtoo ah kama difaaci karto oo keliya alaabooyinka baakadeysan naxdinta, roobka, qoyaanka, iyo miridhku, laakiin sidoo kale waxay ka dhigi kartaa inay ku guuleystaan ​​wax soo saarku alaabtiisa oo si qurux badan loo daabacay, waxayna si fiican u tusi kartaa sawirka wanaagsan ee soo saaraha. Maalmahan, soo-saareyaasha baakadaha ee sii kordhaya waxay isticmaalaan filim duuban oo daabacan si ay u beddelaan filimka hufan ee hufan. Sababtoo ah filimka soo yaraaday ee daabacan ayaa hagaajin kara muuqaalka sheyga, wuxuu ku habboon yahay xayeysiinta badeecada, iyo sumadda sumadda ayaa saameyn qoto dheer ku yeelan karta quluubta macaamiisha.
Yaree mabda'a mashiinka baakadaha filimka
Isbedel aan macquul aheyn Saldhiga hoose waxaa lagu qalabeeyaa tuuriyeyaal, oo markii la doono la riixi karo, dhererka ayaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo cabirka baakadka.
1. Marka hore u deji waqtiga kuleylka mashiinka.
2. Ka dib markaad riixdo batoonka ama otomaatiga tooska ah, silsiladda gawaarida silsiladda leh ayaa tamar leh oo soo saareysa si ay u riixdo qalabka, qalabkuna wuxuu wadaa silsiladda. Waqtigaan, beddelka u dhawaanshaha gadaashiisa dhululuubta waa la damiyaa. Markay silsiladda santuuqa ku ordo xarunta ugu sareysa ee dhimatay, bedelka u dhawaanshaha hore ee dhululubada santuuqa ayaa la daaraa, waalka soodhaweynta ah ee silsiladda foornada ayaa tamar iyo wax soo saar leh.
3. Marka silsiladda foornada ay u socoto xarunta ugu sareysa ee dhimatay, saacaduhu waxay bilaabayaan inay dib udhacaan oo silsiladda soodhaweynta kuleelka ah ee tamarta leh waa la-tamaryeeyay.
4. Markuu waqtigu dhammaado, sooliyaha birta ah ee silsiladda foornada waa la tamar-shubayaa.
5. Sida ku cad calanka qaabka shaqada, go'aanso haddii aad sii wadayso howsha xigta iyo in kale.
Macluumaadka ku habboon ee ku saabsan yaraynta filimka uu tifaftiraha maanta kuu sheegay halkan waa halkaan. Waxaan rumeysanahay in qof kastaa leeyahay faham dhammaystiran oo ku saabsan kala soocidda filimada soo yaraanaya iyo sida loo isticmaalo filimada soo yaraada ka dib marka la akhriyo sharraxa tafatiraha, sax? Iska yaree filimku runtii waa wax aad u habboon, fududahay in la isticmaalo isla markaana wax lagu baaro kharash-badbaadin ah. Waxyaabaha baakadka noocan ahi maaha kuwo deegaanka u habboon. Way ka sii dhib badan tahay in dib loo warshadeeyo ka dib isticmaalka oo heerka dib u isticmaalku aad ayuu u hooseeyaa, markaa waxaa la dhihi karaa dib looma isticmaali karo. Waxaan rajeyneynaa soo bixitaanka filimada soo yaraanaya ee jawiga wanaagsan iyo jawiga u fiican mustaqbalka.
Polyolefin Iskudhin Heerkulka, Yaree Filimka PCv, Iskudhin Duubista Filimada, Duubista Polyolefin Pof, Kala Bixinta Filimka Vs Duubista, Polyolefin Pof Shrink Film,